कोभिड महामारीसम्बन्धी नियमित बैठकमा जानै छाडे डा. भगवान कोइराला, सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट – Health Post Nepal
२०७७ असार १९ गते १५:२९
कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण तथा रोगथाम नियन्त्रण अभियानमा मन्त्रालयको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक टिमलाई सुरुदेखि नै सघाउँदै आएका डा. भगवान कोइराला अहिले असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
यति ठूलो महामारीमा मन्त्रालय नेतृत्वको भूमिकाबारे बारम्बार प्रश्न उठेपछि डा. कोइराला मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने नियमित बैठकमा उपस्थित हुनै छाडेका छन् ।
कोभिडका सन्दर्भमा चैत अन्तिमदेखि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै अध्यक्षतामा मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीसम्मिलित बैठक बस्ने गरेको थियो ।
सो बैठकका प्राविधिक विज्ञका रूपमा डा. कोइराला नियमित उपस्थित हुनुका साथै उठेका राजनीतिक तथा प्राविधिक विषयमा सल्लाह दिन्थे ।
मन्त्रीको सल्लाहकार समूहमा नभए पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष रहेका डा. कोइराला आउन छाडेको केही समयपछि नै उच्चस्तरीय बैठकसमेत दैनिकबाट सातामा दुईपल्ट मात्रै हुन थालेको छ ।
मन्त्री, सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार लगायतका व्यक्ति उपस्थित हुने बैठकमा डा. कोइरालाले प्राविधिक र प्रशासनिक विषयमा समेत स्पष्ट सल्लाह दिनुका साथै क्वारेन्टाइन, परीक्षण, उपचारलगायतका विषयमा प्राविधिक गाइडलाइन बनाउने काममा समेत संलग्न हुँदै आएका थिए ।
‘म एक हिसाबले धेरै छलफलमा सहभागी भएर भनेको नलागेर विक्षिप्त भएर हिँडेको बेला पनि हो,’
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार बैठकमा आउन छाड्नु केही समयअघि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव, गाइडलाइन र नीतिगत विषयमा भएका प्राविधिक त्रुटि, नियन्त्रण अभियानमा मन्त्रालयको नेतृत्व नभएको विषयमा उनले स्पष्ट कुरा राखेका थिए ।
ती विषयमा सुनुवाइ नभएपछि कोइराला आउन छाडेका हुन् । लामो समयपछि उनी शुक्रबार स्वास्थ्य सचिव संयोजकत्वको सरोकारवाला संस्था तथा निकायको बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
बुधबार कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा समेत कोइरालाले यो विषयको खुलासा गरेका थिए ।
पत्रकार कृपाल गौतमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कोइरालाले परीक्षण मापदण्ड, महामारी नियन्त्रण अभियानमा निजी क्षेत्रका अस्पतालको संलग्नता सवालमा असन्तुष्टि राखेका छन् ।
उनले निर्देशन, नीति निर्माण र तय गर्ने काम स्वास्थ्यको हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘म एक हिसाबले धेरै छलफलमा सहभागी भएर भनेको नलागेर विक्षिप्त भएर हिँडेको बेला पनि हो,’ डा. कोइरालाले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाउन सकिने सम्भावना थियो, अझै छ र एक्सप्लोर भएन,’ डा. कोइरालाले भने ।
अहिले भित्रभित्र समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेकाले महामारी जति नै नियन्त्रण गर्छु भने पनि परीक्षणको दायरा नबढाउँदा त्यो सम्भव नहुने र दारया बढाउनुपर्ने डा. कोइरालाको जोड छ ।
उनले सरकारको केन्द्रीय प्रयोगशालाले पनि महामारी चाप बढ्दै जाँदा पर्याप्त इनोभेसन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘पुल र डिरेक्ट स्वाब संकलन विधिबाट गर्र्न सकिने भए पनि दुई महिनाअघिदेखि नै हामी दबाब दिँदा पनि भएन,’ उनले भने, ‘बल्ल गैरसरकारी क्षेत्रले अनुमति पाएको छ, तर सकिने जति सम्भावनाको एक्सप्लोर नै भएको छैन।’
क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई परीक्षण नगरी घर पठाउने सरकारी मापदण्ड पनि गलत भएको उनको तर्क छ। आफूले यो निर्णय परिमार्जनका लागि सिस्टमभित्रै लडेको भन्दै उनले विदेशबाट आउनेलाई सुरुमै परीक्षण गरेर लक्षण नदेखिए फेरि १४ दिन राखेर पठाउने गरी गाइडलाइन बनाऔं भन्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नटेरेको डा. कोइरालाको भनाइ थियो ।
‘स्वास्थ्यको पोलिटिकल लिडरसिप हुनुपर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमन्त्री हि इज नाइस गाइज तर नाइस इज नट इनफ,’ डा. कोइरालाको टिप्पणी छ, ‘अहिले त प्रधानमन्त्रीपछिको सेकेन्ड इन कमान्ड अफ दी नेसन स्वास्थ्यमन्त्री हुनुपर्ने होइन? अरु हुने हो र?’
उनले महामरी नियन्त्रण अभियानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘पोलिटिकल कमान्ड’ पनि असफल भएको बताए ।
डा. कोइरालाले मन्त्री आफू बलियो बन्न नसकेको र आफू मातहतमाथि कमान्ड पनि राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सन्दर्भमा स्वास्थ्यको संलग्नता खासै नदेखेको र त्यस विषयमा अहिले नभन्ने बताए ।
‘कमान्ड गर्नुपर्र्ने भूमिकामा रहनुपर्ने हो त्यहाँ कमी छ । जति उहाँ बलियो, संयमित र नियन्त्रण हुने हो,’ उनले भने, ‘उहाँले काम गरिरहेका केही मान्छे कम्पिटेन्टसमेत नभएका छन् ।’
डा. कोइरालाले आफू मन्त्रालयको सल्लाहकार नभएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सहयोग पुर्याएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो भूमिका स्वयंसेवकको रूपमा मात्र भएको बताए । ‘सुरुका ६० दिन धेरै इन्जेग भएर काम गरियो,’ उनले भने, ‘दिएको सल्लाह कार्यान्वयन नभएपछि सधैं पछि लागेर हिँड्ने कुरा भएन । केही समयदेखि म काउन्सिलको दायरामा छु प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बैठकमा जान्छु।’
Tags: कोभिड नियन्त्रण, डा. भगवान कोइराला, प्रा.डा. भगवान कोइराला, महामारी नियन्त्रण